Dogoggoraan haa ta’u beekaa lukti Kaffaaloo Tafarraa lamaan irraa citee mana hidhaatti OPDO TPLF dararamaa turee. Haqa Mohaammad Abdullaaziiz argate Kaffaaloo Tafarraas Hatattaman argachuu qaba – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsDogoggoraan haa ta’u beekaa lukti Kaffaaloo Tafarraa lamaan irraa citee mana hidhaatti OPDO TPLF dararamaa turee. Haqa Mohaammad Abdullaaziiz argate Kaffaaloo Tafarraas Hatattaman argachuu qaba
Bagaa gammadee Oromoo!!!!#Kaffaaloo_Tafarraa fi Mohaammad Abdullaaziiz :Mohammed Abdullaaziiz Haqa argite jira sababaa Ogeegii furmaataa tahee;Dogoggoraan haa ta’u beekaa lukti Kaffaaloo Tafarraa lamaan irraa citee mana hidhaatti OPDO TPLF dararamaa turee. Haqa Mohaammad Abdullaaziiz argate Kaffaaloo Tafarraas Hatattaman argachuu qaba. Dogoggora ogeessota fayyaan OPDO TPLF kan jireenyi isaa gufate Kaffaaloo Tafarraaf beenyaan haa kaffalamu. Yakkamtoonni OPDO TPLF jireenya isaa gufachiisanis seeratti addungaatti ICC dhihaachuu qabu.
Masfin Abbabaa: ”Tasfaahun Camadaa dhabuun gadda na keessaa hin baanedha”
Image copyrightAYYAANAA CIMDEESSAA Goodayyaa suuraa Injinar Masfin Abbabaa murtee du’aa fi umurii guutuu booda hidhaa hiikame
(bbc)—Abbaan Alangaa Federaalaa namoota shororkeessumaa fi yakkoota biroon himataman 304 dhiifamaan akka gadhiifaman beeksise. Namoota dhiifamaan gadhiifaman keessaa kanneen murteen du’aa itti murta’ee ture 9 fi lammiileen biyya alaa 3 akka argamanis beekameera.
”Dhiifama alanaa kana kan adda isa godhu namoota dhiifaman gadhiifaman keessaa 289 namoota shororkeessumaan himatamanii duuti, hidhaan umurii guutuu fi waggoota dheeraa itti murta’ee turan ” akka ta’an Abbaan Alangaa Federaalaa Obbo Birhaanuu Tsaggaayee BBC tti himaniiru.
Akka Obbo Birhaanuun jedhanitti namoota hiikaman kun harki caalaan isaanii Oromoodha.
Namoota dhiifamaan gadhiifaman keessaa murteen du’aa kan itti murtaa’e ture Injinar Masfin Abbabaas keessatti argama.
Murtee du’aa fi umurii guutuu booda…
Gaaffiif deebii BBC waliin taasiseen Injinar Masfin, murteen du’aa wayita isaa fi waahillan isaarratti murtaa’u manni murtii ragaa qabatamaa qabaatee waan hin taaneef ”ufitti amanamummaa guddaan akka keessa dabarru waan beeknuuf yeroo saatti homaa nutti hin fakkaanne turee” jedha.
”Murteen du’aa narratti murtaa’ee ture gara umuri guutuutti akka fooyya’e mana dukkanaa keessa waanan tureef nama fi maatiis wajjin wal argaa waan hin turreef kaniin bare waggaa 2ykn 3 booda” jedha.
Michuu isaa waliin hidhamanii turan, Tasfaahun Camadaa du’aan of biraa dhabee inni hidhaa bahuu isaatti gaddi guddaan itti dhagaahamuus imimmaanii waliin ibsa.
”Gadda na keessaa hin baanedha. Nama akka Tasfaahuun dhabuu jechuun baayyee ulfaataadha. Qabsoo keessatti wanna baayyee dhabuun ture, qaama sanaa ta’uun of biraa dhabuun koo bayyee na gaddisiisa” jedha.
[perfectpullquote align=”right” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]Murteen du’aa narratti murtaa’ee ture gara umuri guutuutti akka fooyya’e kaniin bare waggaa 2ykn 3 booda[/perfectpullquote]16
Maatiin isaa gammaduutti innis gammaduu himuun, wantoota darban yeroo yaadatu gaddi waan itti dhagaahamuuf miirri wal-makaan akka isatti dhagaahamus dubbata.Amma daandii qaxxaamuraarra jirra, hawwiin keenya biyya walqixxummaan keessatti mirkanaa’e, biyya dimookraasiin keessatti dagaage, biyya guddoo akka taatuu dha kuni fallisaa harka mootummaa jira jechuun uumatni qabsoosaa itti fufuu qabas jedha.
Akka nama du’ee boolla keessa bahee tokkootti gammachuu guddaatu natti dhagaahame jedhu harmeen Injinar Masfin aadde Likkituu Tarrafaa.
Mana hidhaa keessa wayita ture ” waanta bahuyyuu natti hin fakkaatu abdii akkasii hin qabnu. Odeeffannoo tokkko tokko dhageenya har’amoo bor du’a jennee eegna. Maal dhageenya jennee yaaddofna” turee jedhu.
Abbaan Alangaa Federaalaa Obbo Birhaanuu Tsaggaayee dabalanii, ”Keessumaa ammoo namoonni qaamni isaanii mana hidhaa keessatti miidhame kan akka Kaffaalee Tafarraa kan miilli isaa lamaan irraa murame as keessatti argama” jedhu.
Hedduun namoota dhiifamaan gadhiifamanii miidhama qaamaa kan qabaniifii yeroo dheeraaf rakkoo fayyaa namoota qaban akka ta’anis ibasniiru.
Namoota dhiifamaan gadhiifaman kan keessa lammiileen Keeniyaa sadii dhimmaa yakka Itiyoo Telekoom keessatti raawwatee tureen qabamiin turan gadhiifamuus himaniiru.
Manneen hidhaa Federaalaa keessa namni shororkeessumaan himatamee jiru akka hin jirres himaniiru.
”Sababa shororkeessumaatiin itti murtaayee namni hafe tokko iyyuu hiin jiru, hundasaaniiyyuu dhiifamaan gadhiifnee jirra” jedhaniiru.
Ethiopia : ጠ-ሚ ዶ-ር አብይ አህመድ በወቅታዊ የሀገራችን ጉዳይ ላይ የሰጡት ጠንካራ መግለጫ